Abadali konke ukuphila Emhlabeni (kuhlanganise nabantu) Kumelwe ukuba ayezicabangela okwawo ngalokho okwenza ukuphelela. Kimi, ngenxa yesikhundla enganginaso nesizotha, lo mbuzo ibonakala ihlukile. Kuyinto unjengomuntu ku umqhele indalo? Spineless, njalo preoccupied okuthile (isigaba ukudla, ukukhiqizwa kabusha, ukubulawa zazo siqu). Yiqiniso, enengqondo, kodwa inyama ibuthakathaka kakhulu, futhi ngokuvamile sidangele. Kungakhathaliseki ibhizinisi - izitshalo. Nazi izilwane ziyakwazi ukukhiqiza namandla avela elangeni (photosynthesis), zinde (ngisho nezinkulungwane zeminyaka), ukufinyelela usayizi omkhulu, ukuba ngaso sonke isikhathi endaweni efanayo.
Ngokusho idatha etholwe ngenxa nokuvivinywa okuhlukahlukene, ezinye izitshalo kungase kuthathe amashumi eminyaka ngokugcwele autonomously endaweni evalelekile, ngaphandle ukufinyelela air nezinye izakhi kusuka ngaphandle. Ukuthola kuphela kwelanga, bayakwazi ukudala yena a microenvironment efanelekayo ukuphila, futhi njalo ukwakhela kulo. izimila eziningi ahlelwe njengoba ezisengcupheni, eqinisweni, ophethe irekhodi ikhono ukusinda ezinzima. Vele ngisho lokhu manje hhayi ngokwanele ukuba ephila khona nabantu. Russia, e-Australia, Kazakhstan, USA, Ukraine nakwamanye amazwe ozama ukulondoloza ekhona ezindaweni zabo imiphakathi isitshalo. Kodwa ngisho ukwazi lapho izitshalo ahlelwe njengoba ezisengozini, abantu baziphathe budedengu. Ukukha izimbali ezingavamile e sezimbali (ngoba bebahle ngakho!), Ukusika nemithi ifenisha workshop (izinkulumo imali), njll
Umbuso yemifino emhlabeni imelelwa ebanzi kakhulu futhi ezihlukahlukene - kusukela wakudala redwoods giant kuya ulwelwe amancanyana olwandle. Yiqiniso, ngokwesimo abamele flora kukhona eziningi izitha. Kodwa omkhulu kubo - indoda imisebenzi yayo ibhizinisi. Kucekela phansi amahlathi kanye bangcolisa umoya namanzi, singazi ukuqaphela ukuthi ngokwenza kanjalo simbulala thina. Ngakho-ke, sizama ngandlela-thile ukulungisa isimo, ukudala umphakathi ukuze kuvikeleke imvelo ngokungena ngemvume izicelo ezifanele, ethula izilwane ezisengozini yokuqothulwa eNcwadini Red.
Umangele izitshalo ohlwini ezisengozini, maduze kuzoba lula ukuphendula, okuyinto singekho ohlwini kuwo. Labo ngamabomu uhlakulela esintwini: izitshalo wezolimo, Ornamental futhi endlini. Zonke abamele yezimila nezilwane ezihlukahlukene abahlala imvelo, kufanele jostle noma ukufa, njengoba umuntu umane kudingeka isikhala esiningi, ngoba singamalungu amaningi - izigidigidi!
Ngakho lokho izitshalo ohlwini ezisengozini? Kuwo wonke amazwekazi has a uhlu edabukisayo zinhlobo anjalo. Inzima kakhulu ukuthi ukubaleka sendawo - labo izinhlobo zitholakala kuphela endaweni eyodwa emhlabeni. Ngokwesibonelo, kukhona izitshalo ezisohlwini Red egwalweni ukubaluleka lonke noma lesifunda. Phakathi kwabo: macranthon slipper ntokazi, East grouse laseSiberia likaDagan anemonoides-Altai, Corydalis pritsvetnikovaya nabanye abaningi.
Ekucubunguleni izitshalo ohlwini endemics ezisengozini yokuqothulwa kwalokho, kungenziwa baphetha ngokuthi kwezinhlobo zezinyoni ezingavamile futhi njalo ekunciphiseni yayo ukukhahlamezeka kwendawo zezitshalo futhi kakhulu. Cishe kuwo wonke amazwe (ngisho noma iyiphi indawo yayo) iyona "Red Book" izitshalo ezisengozini yokuqothulwa. Kodwa lokhu kuvikela elifakwe kunoma imuphi izinhlu izimbali, izihlahla, utshani nezihlahla anganikeza akukho ncwadi ebomvu futhi ngisho ukuvikelwa isimo (Nokho, kubaluleke kakhulu). Kuyadingeka ukuthi abantu ebuntwaneni bakuqaphela ukubaluleka ekulondolozeni ezimileni. Ukuze ngisho isandla zingavuki ukuphazamisa imbali enhle ehlathini noma ngiwunqamule igatsha. Ngokusobala, imfundo kuphela kungasiza.
Phakathi naleso sikhathi, siyaqhubeka nsukuzonke ukulahlekelwa zezimila. Futhi cishe lokhu kulahlekelwa uhluleka ukwenza i.
Eared inhloli: incazelo nesithombe. Inhloli esinamadlebe amade udla?
Izindlela ngcono ibhizinisi
Intombazane Aries: isici